ဟန္ၿငိမ္းဦး တင္လိုက္တဲ့ သူမရဲ႕ အခ်စ္ေရး အေၾကာင္း ကို ေျပာျပလာ တဲ့ “ေအးျမျဖဴ” – Let Pan Daily
ဟန္ၿငိမ္းဦး တင္လိုက္တဲ့ သူမရဲ႕ အခ်စ္ေရး အေၾကာင္း ကို ေျပာျပလာ တဲ့ “ေအးျမျဖဴ”
အႏုပညာရွင္ အေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ လ်ိဳ႕ဝွပ္ တစ္ခ်ိဳ႕ကို အၿမဲ ထုတ္ေဖာ္သူ အေမႊစိန္ ဟန္ၿငိမ္းဦး ကေတာ့ မေန႔ကေတာ့ ေအးျမျဖဴ နဲ႔ ပတ္သတ္ တဲ့ အေၾကာင္းေတြ ဖြင့္ခ်လာခဲ့ပါတယ္။
” ေအးျမျဖဴ ေလး ေတာင္ ဆို႔ေအာက္ ျဖစ္ေနၿပီ..သူ႔ ငယ္သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ပဲ😍 ဒီတိုင္းေလးပဲ ထားလိုက္ပါအုံးမယ္ ခေလးေတြကငယ္ေသးေတာ့ နားလည္ေပးလိုက္ပါေနာ္..။သူ႔အမကိုယ္တိုင္ကလည္း မ တင္ဖို႔ေမတၱာရပ္ခံထားလိုပါ ..တြဲခဲ့တာမွန္ေပမယ့္.. ခုခ်ိန္မွာ အႏုပညာခရီးကို စိတ္ေျဖာင့္ေျဖာင့္ေလးနဲ႔ပဲ ျဖတ္သန္းခ်င္ လို႔ပါတဲ့ မိတ္ေဆြေတြ လိုပဲ ခင္ေတာ့မယ္တဲ့..။အားလုံး please သူ႔ထက္ စိတ္ဝင္စရာသတင္းေတြပဲ တင္ေပး မယ္ေနာ္😍ဆိုၿပီး ဦဟန္ ဆိုသည့္ Pageမွာ ယခုလို ေရးသားထားပါတယ္။
ဒီသတင္းနဲ႔ ပတ္သတ္ ၿပီး ယေန႔မွာေတာ့ ေအးျမျဖဴဟာ “အခ်စ္ေရးက Instock ပါ Sold မ Out ပါဘူး အေမက မေန႔ကေတာင္ ေျပာေနတယ္…။ နင္နာမည္ ပိုႀကီးၿပီေပါ့ တဲ့ မစိုးရိမ္ၾကပါနဲ႔လို႔ “…ဟန္ၿငိမ္းဦး …..pageက တင္ လိုက္တဲ့ ခ်စ္သူရွိေနၿပီ ဆိုတဲ့ သတင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အင္တာဗ်ဴးမွ ယခုလို ေျပာျပလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အခုလိုအဆုံး ထိဖတ္ရႈေပးတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ Page မွ အထူးပင္ေက်းဇူးတ င္ရွိပါတယ္ေနာ္…ေနာက္မ်ားမွာလည္း အခုလိုဆယ္လီတို႔ရဲ႕ သတင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီတင္ဆက္ေပးမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ကြၽန္ေတာ္တို႔ Page ေလးကို Like & See First ေလးလုပ္ေပးသြားၾကပါအုံးေနာ္….
Source : U Han, CC
ဟန်ငြိမ်းဦး တင်လိုက်တဲ့ သူမရဲ့ အချစ်ရေး အကြောင်း ကို ပြောပြလာ တဲ့ “အေးမြဖြူ”
အနုပညာရှင် အတော်များများရဲ့ လျို့ဝှပ် တစ်ချို့ကို အမြဲ ထုတ်ဖော်သူ အမွှေစိန် ဟန်ငြိမ်းဦး ကတော့ မနေ့ကတော့ အေးမြဖြူ နဲ့ ပတ်သတ် တဲ့ အကြောင်းတွေ ဖွင့်ချလာခဲ့ပါတယ်။
” အေးမြဖြူ လေး တောင် ဆို့အောက် ဖြစ်နေပြီ..သူ့ ငယ်သူငယ်ချင်းနဲ့ပဲ😍 ဒီတိုင်းလေးပဲ ထားလိုက်ပါအုံးမယ် ခလေးတွေကငယ်သေးတော့ နားလည်ပေးလိုက်ပါနော်..။သူ့အမကိုယ်တိုင်ကလည်း မ တင်ဖို့မေတ္တာရပ်ခံထားလိုပါ ..တွဲခဲ့တာမှန်ပေမယ့်.. ခုချိန်မှာ အနုပညာခရီးကို စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်လေးနဲ့ပဲ ဖြတ်သန်းချင် လို့ပါတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ လိုပဲ ခင်တော့မယ်တဲ့..။အားလုံး please သူ့ထက် စိတ်ဝင်စရာသတင်းတွေပဲ တင်ပေး မယ်နော်😍ဆိုပြီး ဦဟန် ဆိုသည့် Pageမှာ ယခုလို ရေးသားထားပါတယ်။
ဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သတ် ပြီး ယနေ့မှာတော့ အေးမြဖြူဟာ “အချစ်ရေးက Instock ပါ Sold မ Out ပါဘူး အမေက မနေ့ကတောင် ပြောနေတယ်…။ နင်နာမည် ပိုကြီးပြီပေါ့ တဲ့ မစိုးရိမ်ကြပါနဲ့လို့ “…ဟန်ငြိမ်းဦး …..pageက တင် လိုက်တဲ့ ချစ်သူရှိနေပြီ ဆိုတဲ့ သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အင်တာဗျူးမှ ယခုလို ပြောပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုအဆုံး ထိဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော် တို့ Page မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတ င်ရှိပါတယ်နော်…နောက်များမှာလည်း အခုလိုဆယ်လီတို့ရဲ့ သတင်းများနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Page လေးကို Like & See First လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအုံးနော်….
ဖြူဖွေးဝင်းဥနေတဲ့ အသားအရေ လေး နဲ့ ကြွေရုပ်လေးသဖွယ် ချစ်ဖို့ ကောင်းနေတဲ့ နန်းဆုရတီစိုး
ဒူဘိုင်းမြို့ရဲ့ ရင်ခုန်စရာကောာင်းလွန်းလှတဲ့ အလှတရားတွေ ကို ရဟတ်ယဉ်ပေါ်ကနေ ခံစားကြည့်ရှုနေတဲ့ နန်းမွေစံ ရဲ့ ဗီဒီယို
ခုလိုအားလုံး ခက်ခဲနေကြတဲ့ ကိုဗစ်ကာလကြီးမှာ အလှူလာခံတဲ့သူတွေကို ပွင့်ပွင်းလင်းလင်း ပြောလိုက်တဲ့ လမင်းကဗျာ
ကိုယ်လုံး သေးသေးလေး ရဲ့ အလှပေါ်လွင်နေတဲ့ အသားကပ် ဝတ်စုံလေး ဝတ်ဆင်ကာ GYM ကစားနေ တဲ့ ခင်သဇင်